Midabaynta rinjiga Casriga ah ee ugu Fiican
votetruono.com waa degel bixiya midabyo kala duwan qaab sawirada. Midabada ayaa ah shay aad muhiim ugu ah nolosheena. Midabku wuxuu leeyahay rafcaan u gaar ah aadanaha. Waxaa intaa dheer, websaydhkan ayaa sidoo kale soo bandhigaya naqshad kala duwan oo guriga ah iyo rinjiyeynta taas oo ah mushahar aan ka yaraynayn midabka. Kaliya kuma eka rinjiyeynta, qalabka guryaha ama rinjiga gidaarka waxay leeyihiin kala duwanaansho midab oo xiiso leh.
Websaydhka ugu fiican ee soo bandhiga wax kasta oo ku saabsan midabka. Boqollaal kun oo midabyo iyo muuqaalo ah ayaa dhammaantood laga heli karaa websaydhkan. Websaydh cajiib ah oo bixiya midabo badan qaab sawirada, midabyadu waxay noqdaan wax aad u muhiim ah nolosheena. Midabku wuxuu leeyahay rafcaan u gaar ah aadanaha. Waxaa intaa dheer, websaydhkan ayaa sidoo kale soo bandhigaya naqshad kala duwan oo guriga ah iyo rinjiyeynta taas oo ah mushahar aan ka yaraynayn midabka. Kaliya kuma eka rinjiyeynta, qalabka guryaha ama rinjiga gidaarka waxay leeyihiin kala duwanaansho midab oo xiiso leh. Waxaan kalsooni ku qabnaa inaadan ka niyad jabin doonin soo bandhigida sawir ee websaydhkan.
Hal Guji barta websaydhkan, aaladdu way buuxin doontaa oo waxay heli doontaa cabir midab leh waxayna tusi doontaa liiska midabka aad rabto Sida sawirka midabka, magaca midabka, cabirka midabada iyo isku darka midabada. Tani waa goob aad u wanaagsan. Midabyo badan ayaa la ogaan karaa iyo cabirka. Faa’iidooyin dheeraad ah ayaa ah liistada xajmiga midabka si dhakhso leh. Marka, raadi oo ku raaxee boggan si aad uhesho midabyo kala duwan.
Guud ahaan, midabka dhalaalaya wuxuu siiyaa aragti farxad leh oo farxad leh. In kasta oo midabka jilicsan uu siinayo xasilloonida iyo jilicsanaanta. Adeegsiga midabku wuxuu ku xiran yahay qof walba. Sida midabka qolka jooga oo la rumeysan yahay inuu kicin karo firfircoonida maskaxda iyo maskaxda. Midabka ku habboon oo aad jeceshahay midabka, tani waxay xitaa saameyn ku yeelan kartaa kordhinta xirfadahaaga falanqaynta.
Midabku wuxuu saameyn badan ku leeyahay noloshan iyo maskaxdeenna. Laga soo bilaabo dhowr nooc oo midabyo ah, midabada buluugga ah ee badanaa la xiriira xirfadda iyo kalsoonida. Marka ku xigta, midabada buluugga ahi waa mid ka mid ah midabada aasaasiga ah waxayna isku dari karaan midab kale, tusaale ahaan waa isku dhafka midabka aasaasiga ah haddii midabada buluugga ah lagu shubo midab kale oo aasaasi ah waxaa jira midabyo huruud ah sidaa darteedna natiijooyinku waa midab cagaaran. Suurtagalnimada, tani waa sababta sababta midabadaas loogu jeclaaday. Midabka cagaarka ayaa aad ugu habboon in lagu isticmaalo qol.